FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Xa lisetyenziswe eBhayibhileni, igama elithi “ukholo” lithetha inkolelo esekelwe kubungqina obucacileyo. Umntu onokholo kuThixo uqinisekile ukuba uza kuzizalisekisa zonke izithembiso zakhe.
UMOSES WALUBONAKALISA NJANI UKHOLO?
UMoses wenza izigqibo ezibonisa ukuba uyazikholelwa izithembiso zikaThixo. (Genesis 22:15-18) Ngewayephile ubomi obutofotofo eYiputa, kodwa wancama yonke loo nto, “enyula ukuphathwa kabuhlungu kunye nabantu bakaThixo kunokuziyolisa ngesono okwexeshana.” (Hebhere 11:25) Ngaba eso sigqibo wasenza engakhange acingisise kakuhle, waza kamva wazisola? Hayi. Kaloku iBhayibhile ithi uMoses “waqhubeka eqinile ngokungathi uyambona Lowo ungabonakaliyo.” (Hebhere 11:27) UMoses akazange azisole ngezigqibo awazenza eqhutywa lukholo.
UMoses wanceda abanye ukuze babe nokholo kuThixo. Ngokomzekelo, makhe sithethe ngoko kwenzekayo xa kwakubonakala ngathi amaSirayeli aza kuhlaselwa ngumkhosi kaFaro kuLwandle Olubomvu. Egubha luloyiko kuba ebona ngathi aza kubulawa, amaSirayeli akhala kuYehova nakuMoses. Wayeza kwenza ntoni uMoses?
UMoses ufanele ukuba wayengazi ukuba uThixo uza kwahlula uLwandle Olubomvu phakathi ukuze asindise amaSirayeli. Sekunjalo, wayeqinisekile ukuba uThixo uza kubakhusela abantu Bakhe. UMoses wayefuna ukuba amaSirayeli amthembe njengaye uThixo. Sifunda oku: “Wathi uMoses ebantwini: ‘Musani ukoyika. Yimani ngokuqinileyo, nilubone usindiso lukaYehova, aya kunenzela lona namhlanje.’” (Eksodus 14:13) Ngaba uMoses wakwazi ukuqinisa ukholo lwamaSirayeli? Ewe wakwazi, kuba kaloku iBhayibhile ithi ngoMoses namaSirayeli: “Ngokholo badlula kuLwandle Olubomvu ngokungathi kukumhlaba owomileyo.” (Hebhere 11:29) Ukholo lukaMoses lwanceda yena nabo bonke abo bafundayo kumzekelo wakhe.
Nathi sinokuxelisa uMoses ngokuphila ngendlela ebonisa ukuba sinokholo kwizithembiso zikaThixo. Ngokomzekelo, uThixo uthembisa ukusinika izinto eziyimfuneko ukuze siqhubeke siphila, ukuba simbeka kwindawo yokuqala ebomini bethu. (Mateyu 6:33) Enyanisweni, lo moya uphandl’ apha wokufuna izinto eziphathekayo uyahenda. Kodwa ke, siqinisekile ukuba uYehova uya kusinika konke esikusweleyo ukuba sizimisela ukuphila ubomi obulula, kuze ukukhonza uThixo kube yeyona nto iphambili kuthi. Uthi: “Andiyi kuze ndikushiye, ndingayi kuze ndikutyeshele.”—Hebhere 13:5.
Kwakhona, sifanele sizame ukunceda abanye babe nokholo. Ngokomzekelo, abazali abalumkileyo bayaqonda ukuba bafanele bancede abantwana babo babe nokholo. Njengoko bekhula, abantwana bafanele bafundiswe ukuba uThixo uyaphila yaye usinike imithetho yokulungileyo nokungalunganga. Kwakhona, bafanele baqonde ukuba ukuthobela uThixo yeyona nto iluncedo ebomini. (Isaya 48:17, 18) Abazali babanika esona sipho sixabisekileyo abantwana babo xa bebanceda bazi ukuba uThixo “ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfuna ngenyameko.”—Hebhere 11:6.